«EthicalGEO» - isidingo sokubuyekeza ubungozi bokuthambekela kwendawo
Ngo-Okthoba, 2019 Geospatial - GIS
I-American Geographical Society (AGS) ithole isibonelelo ku-Omidyar Network ukuze iqale ingxoxo yomhlaba wonke mayelana nokuziphatha kobuchwepheshe be-geospatial technologies. Eyakhelwe i-"EthicalGEO", le nqubo icela abacabangi abavela kuzo zonke izinhlaka zokuphila emhlabeni wonke ukuthi bethule imibono yabo emihle ngezinselelo zokuziphatha zobuchwepheshe obusha obuhlanganisa umhlaba wethu kabusha. Ngenxa yesibalo esikhulayo samasu amasha asebenzisa idatha / ubuchwepheshe bendawo kanye nezinkinga zemihlahlandlela yokuziphatha ecacile, i-EthicalGEO ifuna ukudala ipulatifomu yomhlaba wonke yokuqhubekisela phambili inkhulumomphendvulwano edingekayo.
“Kwi-American Geographical Society sijabule ukusebenzisana ne-Omidyar Network kulolu hlelo olubalulekile. Silangazelela ukuvula ubuhlakani obuhle bomphakathi owandisiwe we-geospatial kanye nokwabelana ngemibono yabo nomhlaba kule nkundla yomhlaba, ”kusho uDkt Christopher Tucker, umongameli we-AGS.
"Ubuchwepheshe beGeospatial buyaqhubeka nokuba ngumthelela omuhle kakhulu, noma kunjalo, kunesidingo esikhulayo sokubhekana nemiphumela engafuneki engase ivele ngokuqhamuka kobuchwepheshe obunje," kusho uPeter Rabley, uzakwethu obhekene nengozi e-Omidyar Network. "Siyajabula ukweseka ukwethulwa kwe-EthicalGEO, okuzosisiza ukuthi sizwisise kangcono ukuthi singazivikela kanjani ekuphazamiseni okungenzeka sibe nokuthola umthelela omuhle ubuchwepheshe be-geospatial bungaba nawo ekuthuthukiseni izixazululo zezinkinga ezinkulu ezicindezelayo zesintu, ngokuthi ukushoda kwamalungelo empahla yempahla, ukuguquka kwesimo sezulu kanye nentuthuko yomhlaba.
I-EthicalGEO Initiative izomema abacabangi ukuthi balethe amavidiyo amafushane aqokomisa umbono wabo omuhle kakhulu wokubhekana nezinkinga zokuziphatha ze- "GEO". Ukusuka ekuqoqweni kwevidiyo, kuzokhethwa inombolo encane ezothola imali yokwandisa imibono yabo, futhi inikeze isisekelo sengxoxo eyengeziwe, okwakha isigaba sokuqala samalungu e-AGS EthicalGEO Fellows.
Ukuze uthole olunye ulwazi, vakashela www.ethicalgeo.org.
Thumela Previous«Langaphambilini Ukuhlanganiswa komklamo - ukuzibophezela kwi-BIM esezingeni eliphakeme ngamawele weDijithali
Post Next Izinsizakalo ezintsha zefu iTwin zeDijithali yamawebhusayithi weDijithaliOkulandelayo »
Ukwenza imephu yolwandle kukhuphuke ngeSentinel-6
Indima engaba khona ye-GIS ekusatshalalisweni komuthi wokugoma i-COVID-19
Ukumelwa kwendawo ngokukhululeka okufiphaziwe